Wasiir Cabdi Xoosh oo khudbad ka jeediyay shirka heerka sare ee Muqdisho “Sawirro” – Radio Muqdisho
Wasiir Cabdi Xoosh oo khudbad ka jeediyay shirka heerka sare ee Muqdisho “Sawirro”
Wasiirka Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil oo maanta ka qaybgalay Shirka Madasha Iskaashiga Soomaaliya ee Heerka Sare ayaa khudbad dhinacyo badan taabaneysay ka jeediyay, Shirka oo uu ugu horeeyn furay Madaxweynaha JFS, Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ayaa waxaa ka soo qaybgalay Wasiirada DFS, Madaxda Dawlad Goboleedyada, iyo Safiirada dawladaha xiriirka la leh Soomaaliya.
Ra’iisul Wasaare Kheeyre oo qaybtii labaad ee shirka gudoominayay ayaa waxa uu codbaahiyaha ku soo dhaweeyay Wasiir Cabdi Xoosh si uu uga warbixiyo hawlaha ay Wasaaradda qabatay, Wasiirka ayaa ka hadlay hawlaha sideedii bilood ee la soo dhaafay u qabsoomay.
“Wasaaradda Arrimaha Dastuurka iyada oo garoowsan shaqada baaxadda leh ee hortaalla, waxa ay degsatay mabaadi’ ay ku hawlgasho oo ay ugu horeeyaan in waqti go’an lagu soo dhameeyo Geedi-socodka dib-u-eegista Dastuurka (GDD) iyo in la dhiirageliyo ka qaybgal loo dhanyahay oo ballaran. Waxaan kulamo la qaadanay Madaxweynayaasha Dawlad Goboleedyada inaga oo ugu tagnay xarumahooda, sidoo kale Wasaaradaha D/Goboleedyada ayaan sii xoojinay wadashqaynta inaga dhaxeysa waxa aana sameeynay Madal sedexdii bilba mar aan isugu imaano” ayuu yiri Wasiirka.
Wasiir Cabdi Xoosh isaga oo hadalkiisa sii wata ayuu yiri “Mahadcelin ayaan u dirayaa madaxda sare ee dalka oo garwaaqsaday muuhimadda GDD iyaga oo go’aan ku gaaray in qarashaadka ku baxaya GDD lagu maalgeliyo lacag ay Soomaali leedahay inaga oo og kaalinta ay Wasaaradda kaga jirto Miisaaniyadda sanadka 2018”.
Dhanka kale, Wasiirka oo amaan u diray dhamaan dadka ay shaqada kala dhaxeyso ayaa yiri “Hawlaha aan qabanay ma ahayn mid sahlan kuwa inna horyaallana waa kuwo aad u badan, sidaa awgeed, waxa aan hortiinaa amaan uga dirayaa dhamaan masuuliyiinta iyo shaqaalaha Wasaaradda, iyo dhamaan hay’adaha aan shaqo wadaaga nahay ee suurtageliyay horumarka aan ka gaarnay arrimaha dib-u-eegista-dastuurka”.
Ugu dambayn, Avv Cabdi Xoosh ayaa hadalkiisa ku soo gebagabeeyay baaq uu u diray Beesha Caalamka oo ahaa in ay fuliyaan ballamihii ay qaadeen ee ahaa in ay Soomaaliya ku garab istaagayaan GDD iyaga oo ku saleeynaya Qorshaha Horumarinta Qaranka iyo qorshaha u yaalla Wasaaradda.
Wajigii Labaad ee Shirkii London oo lagu soo gabagabeeyay Muqdisho